Caruurtii oo faraxsan ayaa xagga Rasuulka scw ku soo cararay, mid walba oo caruurta ka mid ah wuxuu doonayay inuu ku dhago ama qabsado jirka Rasuulka scw. Imaanshihii Jacfar iyo muhaajiriintii ka timid Xabasha iyo Rasuulka scw oo markaasi ka soo laabtay duulimaadkii Khaybar ayaa wada kulmay, waana kadib markii la furtay Khaybar. Waxay billaabeen inay si xor ah u muujiyaan cibaadooyinkoodii diinniga ahaa, iyadoo aynan arrintaas kala kulmin wax dhibaato ah. Camar ayaa markale ugu jawaabay adiga faraha iga qaad, wallaahi inaan boqorka u sheegi doono inay Nebi Ciise ka aaminsan yihiin inuu yahay addoon. Hoggaamiyihii ciidamada muslimiinta Zeyd Binu Xaaritha ayaa jiidda hore ee dagaalka ku naf-waayay sidiina ayuu ku shahiiday, Allena uga baryaynaa inuu u naxariisto. Markay hadalkaasi uu yiriba waxay farxaddii iyo muusoodkii isu baddashay naxdin iyo walbahaar.
Qoraalka gudaha oo kooban. Intaa kadib waxaa calankii la wareegay geesigii 3-aad ee Cabdillaahi Binu Rawaaxa ilaa isna laga dilo oo uu ka shahiido. Waxaa laga keenay ” https: Intaa dabadeed waxay Camar iyo ninkii la socday ay u yimaadeen Najaashi, iyagoo ku wareejiyay haddiyadihii ay ugu talagaleen, waxayna ku yiraahdeen hadalladan “boqorow waxaa boqortooyadaada soo magangalay qaar ka mid ah dhalinyaradeena kuwadooda shar-wadayaasha ah, waxay la yimaadeen diin aanan innaga iyo aabayaasheenaba aqoonin, way ka baxeen diinteennii oo mana aynan qaadeen diintiinii, innaga waxaa na soo diray tolka ay iyaga ka dhasheen ugaasyadooda oo ay ka mid yihiin aabayaashoodii, adeeradooda iyo kuwa ay qaraabada yihiin si aan iyaga gacanta ugu gelino, fitnada iyo dhibaatada ay abuureena iyaga ugaasyadaas ayaa naga badiya”. Wuxuu aaday guriga Jacfar oo ay ilmo adeero ahaayeen. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Maalintii danbe markii la gaaray ayaa Camar wuxuu u galay boqorkii Najaashi, wuxuuna ku yiri boqorow kuwan aad magangalyada siisay waxay ku sheegayaan Ciise Ina Maryama hadal aad u weyn, sidaas darteed intaad u yeertid waxaad weydiisaa waxa ay Ciise ka aaminsan yihiin. Xasuuso qoraalkaagu ha noqdo mid faa’iido leh oo dhexdhexaad ah.
Saddex kun oo ciidan ayaa wuxuu la dagaalamayaa labo boqol oo kun oo ciidan, waa labo ciidan oo aan isku aadin.
Ma ahayn ekaanshahaasi keliya mid muuqaal ah, hase ahaatee wuxuu Jacfar Allaha ka raalli noqdee uu sidoo kale ku sifaysnaa akhlaaqdii wanaagsanayd ee uu lahaa Rasuulka scw. Luqadaha kale Ku dar linkiyada.
Qaabka qoraalka maqaalkan ma ahan mid habaysan oo waafaqsan habka wax qorista ee Soomaali Wikipedia. Jacfar iyo Asmaa dhibaatooyinkaas dusha ayay u dhigteen rasuupka way u sabreen una dulqaateen. Muhaajiriintii saxaabada ayaa u anbabaxay dhulkii Xabasha, waxaana muhaajiriintaas qiimaha badan hoggaaminayay saxaabiga jaliilka ah ee Jacfar Bin Abii Dhaalib.
Dhinaca kale, Rasuulka scw isna wuxuu ku soo foorarsaday caruurtii, isagoo dhunkanaya isla mar ahaantaasna ay indhihiisii sharafta badnaa ay ilmeenayaan. Ma Jacfar iyo labadiisii saaxiib ayaa dhibaato soo gaartay?.
Markay hadalkaasi uu yiriba waxay farxaddii iyo muusoodkii isu baddashay naxdin iyo walbahaar. Waxay markii ugu horeysay saxaabadii muhaajiriintii ahaa dareemeen ammaan iyo nabadgelyo buuxda, laga soo billaabo markay soo islaameen.
Wuxuu Rasuulkaas na faray run-sheega, gudashada amaanada, xiriirinta qaraabada, deriska oo la wanaajiyo. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. Markale Ummu Salama waxay tiri “intaa kadib wuxuu boqorkii Najaashi naga codsaday inaan la kulanno.
Wuxuu kaloo na faray inaan Allah “sw” keliya aan caabudno oo aanan u shariik-yeelin, inaan oogno salaadda, bixinno sakada iyo inaan soonno bisha ramadaan. Ummu Salama waxay tiri, Camar iyo saaxiibkiis oo qoomameenaya ayaa dib dalkoodii ugu fiml, hase ahaatee innaga waxaan si maamuus leh u sii joognay dhulkii Xabasha.
Siirada Nabiga Iyo Asxaabta
Markii ay soo gaareen Xabasha ama Geeska Afrika, waxay durbadiiba magangalyo weydiisteen boqorkii Xabasha ee caddaaladda iyo wanaagga badnaa laguna magacaabayay Najaashi. Imaanshihii Jacfar iyo muhaajiriintii ka timid Xabasha iyo Rasuulka scw oo markaasi ka soo laabtay duulimaadkii Khaybar ayaa wada kulmay, waana kadib markii la furtay Khaybar.
Qureysh markay maqleen wararka la xiriira sidii na loo soo dhoweeyay waxay billaabeen inay nagu amar-taagleeyaan, waxay boqorkii Najaashiga u soo direen labo nin oo xoog badan, waxayna kala ahaayeen Camar Bin Al-Caas iyo Cabdullaahi Binu Abii Rabiica, waxayna labadaas nin wadeen haddiyado fara badan oo loogu talagalay boqorka Najaashi iyo wadaaddada kale ee isaga ka ag dhow.
Jacfar oo ka jawaab bixinaya Nebi Ciise cs ayaa yiri “waa addoonkii Alle iyo Rasulka Xasuuso qoraalkaagu ha noqdo mid faa’iido leh oo dhexdhexaad ah.
Taariikhda Saxaabada – Wikipedia
Cali Bin Abii Dhaalib wuxuu ku soo barbaaray gurigaas jeer Rasuulka scw lagu soo saaro diintii hanuunka iyo xaqa wadatay. Hase ahaatee, waxyar kadib waxaa billowday dagaalkii ay dagaallamayeen ciidamada muslimiintii iyo kuwii kale ee gaallada ahaa. Jacfar Bin Abii Dhaalib iyo xaaskiisii qiimaha badnayd ee Asmaa Bintu Cumeys inay soo islaamaan waxaa sababteeda lahaa Abuubakar Assiddiiq Allaha ka raalli noqdee, waxayna ku beegnayd kahor intuusan Rasuulka scw gelin daartii Arqam Bin Arqam ee uu dadka diinta ku bari jiray.
Maxaa yeelay, waxay si dhab ah u yaqiinsanaayeen in waddada Jannada loo maro lagu goglay laguna hareereeyay waxyaabaha ay nafta hsjsjss.
Boqorkii ayaa xaggeenii soo eegay, wuxuuna nagu yiri: Camar ayaa markale ugu jawaabay adiga faraha iga qaad, wallaahi inaan boqorka u sheegi doono inay Nebi Ciise ka aaminsan yihiin inuu yahay addoon.
Waxaan ku iri —hooyaday iyo aabahay ha lagugu furtee- maxaad la oonaysaa?? Waxaa laga keenay ” https: Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda. Abuu Dhaalib oo ahaa Jacfar aabihiis inkastoo maqaam iyo sharaf weyn ka joogay Qureysh, haddana wuxuu ahaa xaal-mastuur oo aan lahayn hanti badan iyo iyadoo ay u dheerayd isagoo lahaa caruur badan.
Waxay markale Ummu Salama tiri “waxaa ooyay boqorkii Najaashi, ilmadii ka soo daadanaysay ayaa garkiisii oo dhan qoysay, wadaaddadiisiina way ooyeen markii ay maqleen aayadihii xaqa ahaa ee laabtoodii gilgilay, kadibna wuxuu boqorkii nagu yiri diintii lagu soo dejiyay Nebigiina iyo diinta lagu soo diray Nebi Ciise waxay ka yimaadeen hal meel, intaa dabadeed wuxuu eegay Camar iyo saaxiibkiisa wuxuuna ku yiri “iska taga, wallaahi ayaan ku dhaartaye inaanan kuwan gacanta idiin gelinaynin”.
Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Bogan wuxuu leeyahay ugu yaraan mid ka mid ah dhaliilahan: Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Qoraalka waa mid kooban yar ; ama warbixin la fahmi karo ma lahan.
Qoraalka gudaha oo kooban. Ma aynan haysan muslimiinta maalintaas awood ay isaga caabbiyaan hagardaamada iyo dhibaatooyinka kaga imaanayay gaalladii qureysh. Dhinaca kale, Jacfar isna wuxuu iskala noolaa adeerkiis Cabbaas. Ummu Salama Allaha ka raalli noqdee oo markaas la socotay muhaajiriintii muslimiinta ayaan sheekadaan inteeda badan ku soo qaadanaynaa waxyaabihii ay la kulmeen muhaajiriintii Xabasha u hijrooday, iyadoo ka sheekeenaysana waxay tiri “markaan nimid dhulka Xabasha waxaan la kulannay dad lala jaaro kuwii ugu kheyrka badnaa, diinteennii ayay nagu nabad geliyeen, iyadoo wax dhibaato ah aanan la kulmin ayaan Rabbigeen si wacan u caabudnay.
Boqorkii Najaashi oo aad uga carooday hadalkii wadaaddadii ka soo yeeray ayaa ku yiri “Maya wallaahi, marnaba lagama yaabo inaan dadkaas dalkooda dib ugu musaafuriyo jeer aan u yeero oo aan waxa uga weydiiyo waxa laga sheegayo, haddii labadaas nin waxay ka sheegeen ay sax noqoto iyagaan gacanta u gelinayaa, hase ahaatee waxa laga sheegayo waxaan ahayn hadday soo baxaan waan magangalinayaa oo waan wanaajin doonaa inta ay ila joogaan”.
SEIMAN WRIST WATCH
Waxay tiri Ummu Salama, markaan arrinkaas ogaannay waxaa nagu soo kordhay murugo iyo tiiraanyo aanan horey noo qabsan, waxaynu is niri, hadduu boqorka wax naga su’aalo Nebi Ciise cs maxaynu niraahnaa??. Si xammaasad weyn ku jirta ayuu dagaalkii u galay, waxa keliya ee u muuqanayay waxay ahayd Jannada iyo bilicdeeda ballaaran, neecowdeeda iyo biyaheeda macaan, xuurul-ciinteeda loo dhammeeyay quruxda, webiyadeeda kala nooca ah intaasoo ay sii siyaadiso rajada weyn ee uu ku qabay raalla ahaanshaha RABBI sw taasoo uusan wax kale ku doorsanaynin.
Markii uu boqorkii Najaashi maqlay hadalkaasi wuxuu gacanta ku garaacay dhulka, wuxuuna yiri.
Ummu Salama Waxay tiri “boqorkii Najaashi wuxuu jaleecay oo eegay Jacfar Bin Abii Dhaalib, wuxuuna ku yiri ma jiraan wax tilmaamaya wixii uu Nebigiina kala yimid xagga Allaah, wuxuuna Jacfar yiri HAA, dabadeedna wuxuu boqorkii ku dul aqriyay suuradda Maryama “kaaf-haa-yaa-cayn-saad- Allaah ayaa og macnaha xuruufahaanwaa sheegid naxariista Rabbigaa u sheegayo addoonkiisa Zakariya, mar uu u dhawaaqayay Rabbigiisa dhawaaq qarsoodi ah, yirina Rabbiyow annigu waan tabar-yaraaday, madaxayguna wuxuu la huray cirro, mana ahayn —Rabbiyoow- baryadaada mid ku khasaara Sidaa darteed, Jacfar Bin Abii Dhaalib wuxuu Rasuulka scw ka fasax qaatay isaga iyo xaaskiisa iyo qaar ka mid ah asxaabta inay u qaxaan dhulka Xabasha oo maanta loo yaqaano Geeska Afrika.
Jacfar oo su’aashaas ka jawaabaya ayaa yiri: Intaa dabadeed waxay Camar iyo ninkii la socday ay u yimaadeen Najaashi, iyagoo ku wareejiyay haddiyadihii ay ugu talagaleen, waxayna ku yiraahdeen hadalladan “boqorow waxaa boqortooyadaada soo magangalay qaar ka mid ah dhalinyaradeena kuwadooda shar-wadayaasha ah, waxay fllm yimaadeen diin aanan innaga iyo aabayaasheenaba aqoonin, way ka baxeen diinteennii oo mana aynan qaadeen diintiinii, innaga waxaa na soo diray tolka ay iyaga ka dhasheen ugaasyadooda oo ay ka mid yihiin aabayaashoodii, adeeradooda fulm kuwa ay qaraabada yihiin si aan iyaga gacanta ugu gelino, fitnada iyo rasulka ay abuureena iyaga ugaasyadaas ayaa naga badiya”.
Ummu Salama oo sii wadata hadalka misna waxay tiri “waxaan durbadiiba u dareernay boqorkii Najaashi, markaan soo gaarnay goobtii kulanka waxaan aragnay boqorkii oo ay weheliyaan wadaaddadiisii oo ay ka fadhiyaan dhinacyada midigta iyo bidixda, aasxaabta soo gashadeen dhar khaas ah, kutubadoodii ayay is hor-dhigeen, waxaa sidoo kale goobtii kulanka fadhiyay Ergadii qureysh ee Camar Bin Caas iyo Cabdillaahi Binu Abii Rabiica.
Caruurtii yaraa ee faraxsanaa markay maqleen oohinta hooyadood waxaa ka soo haray degganaansho lagu hareeyay tiiraanyo daran.
Dhinaca kale, waxaa durbadiiba hoggaankii si geesinimo ku jirta ula wareegay saxaabiga aan ka asxabta ee Jacfar Binu Abii Dhaalib isagoo ka soo dagay faraskiisii.
Cabdullaahi Binu Rawaaxa haddii la dilo ama la dhaawaco markaasi muslimiinta ha iska dhex doorteen mid iyaga ka mid ah. Markii si daran ay noo dulmeen oo ay noo dhibaateeyeen ayaan u soo qaxnay dhulkiina, adiga ayaan dadkii kale kaa dooranay, waxaynu doorbidnay la deriskaaga, waxaan maciin-badnay rasuulja agtaada nalagu dhibaataynin.
Abuu Dhaalib wuxuu ku yiri “haddaad ii dhaaftaan Caqiil, sameeya wixii kale ee aad rabtaan”, dabadeedna Rasuulka scw wuxuu qaatay Cali, Cabbaas-na wuxuu qaatay Jacfar.
Hoggaamiyihii ciidamada muslimiinta Zeyd Binu Xaaritha ayaa jiidda hore ee dagaalka ku naf-waayay sidiina ayuu ku shahiiday, Allena uga baryaynaa inuu u naxariisto.